रोकिएन सुन तस्करी, दुई घटनाले प्रहरीलाई झस्कायो ! « Pahilo News
रोकिएन सुन तस्करी, दुई घटनाले प्रहरीलाई झस्कायो !
प्रकाशित मिति :3July, 2018 7:33 am
काठमाडौं, १९ असार । संगठित सुन तस्करीबारे विशेष समितिले गम्भीर अनुसन्धान गरिरहेका बेला सुन तस्करीका पछिल्ला दुई घटनाले प्रहरीलाई झस्काएको छ ।
१७ गते नागढुंगाबाट पक्राउ परेको तीन केजी सुन भने स्विट्जरल्यान्डको मेटालोर नामक कम्पनीमा बनेको देखिन्छ। कम्पनीको वेबसाइटका अनुसार सन् २००१ मा मेटालोर टेक्नोलोजिज नामक कम्पनीको नाम परिवर्तन गरेर मेटलोर ग्रुप कम्पनी बनाइएको हो।, कान्तिपुर दैनिकबाट